प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १५३ सांसद… – Suchana Sanjal
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १५३ सांसद…
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ०४, २०७८ समय: ११:१६:५२
एमाले र जसपा मात्रै एक ठाउँमा हुने हो भने ओलीको पक्षमा १५३ मत पुग्न सक्छ । ओलीलाई सरकार टिकाउनका लागि जसपाको एउटा टुक्रो मात्रै भए पुग्छ ।
संविधानका धारा–उपधाराहरुले साथ दिनैपर्ने हुन्छ । संसदीय गणित र संविधानका सूत्रहरूले साथ नदिने खेल खेलियो भने त्यो पुस ५ को असंवैधानिक कदमजस्तै आत्मघाती गोल सावित हुन सक्छ । राजनीतिशास्त्रले भनेकै छ, राजनीति खेलको नियमअनुसार खेलिनुपर्छ ।
हाल माओवादीका चार सांसद पदमुक्त भएकाले संसदमा कायम रहेका सदस्यको संख्या २७१ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि २७१ को बहुमत, अर्थात १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काँग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम अनि जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् । निलम्बित सांसदलाई घटाउँदा मतदान गर्न पाउने सांसदहरुको संख्या २६७ हुन जान्छ । यसमध्ये पनि सभामुखले मतदान गर्दैनन् ।
यसर्थ, प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्ने वास्तविक संख्या २६६ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि २६६ मतबाट १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो भोट जसपाबाट आउने र बहुमत पु¥याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा देखिन्छ ।जसपासँग प्रतिनिधिसभामा कुल ३२ भोट छ ।
नेपाली कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग ४८ ( सभामुखको घटाउँदा) र साना दल (राप्रपा, राजमो र नेमकिपा) सँग जम्मा ३ भोट छ । यो सबै जोड्दा कुल मत १४१ हुन जान्छ ।
तर, विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन काँग्रेस, माओवादी र जसपाको लगभग सिंगै भोट चाहिन्छ ।
जसपा फुट्यो भने ओलीलाई बहुमत पुग्न सक्छ । तर, विपक्षीलाई पुग्दैन ।
तर, बैशाख २७ मा उनले विश्वासको मत पाएनन् भन्दैमा संसद विघटन गरिहाल्न संविधानले दिँदैन ।ठूलो दलको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले जेठ २७ भित्र फेरि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, त्यतिबेला पनि उनलाई संसद विघटन गर्न संविधानले दिँदैन ।संविधानतः ओली आफैंले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न पाउँदैनन्, त्यो काम नयाँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
माधव पक्षका सांसदलाई हटाउने वा फकाउने : एकचोटि कल्पना गरौं, केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका स्पष्टीकरण सोधिएका ३० सांसदलाई बैशाख २७ अगावै कारवाही गरेर हटाइदिए भने के हुन्छ ? अथवा, माधव पक्षका सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा ठोके भने बैशाख २७ को ओली–गणितको नतिजा कस्तो आउला ? यस्तो खेलो–फड्कोको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
Last Updated on: May 18th, 2021 at 11:16 am